Kaonty sy tenimiafina Netflix maimaim-poana | Desambra 2020 (Fomba fiasa) - Fialam-Boly
Kaonty Netflix maimaim-poana 2020 | Fomba tsara indrindra ahazoana
Netflix no tranokala fialamboly lehibe indrindra amin'ny Internet. Manana tranomboky fampisehoana sy sarimihetsika goavambe azo alaina izy ireo. Afaka mivezivezy amin'ny kalitaon'ny UHD ireo mpampiasa amin'ny fisoratana anarana. Ny filàna fialamboly amin'ny tranonkala dia nitombo tato anatin'ny volana vitsivitsy. 2020 no taona nanombohan'ny tsirairay tamim-pitandremana ny fandoavana famandrihana nomerika tamin'ny fahitalavitra telegrama.
Misy famoahana matetika eo amin'ny lampihazo, ary misy zavatra ho an'ny rehetra. Amin'ity toro-lalana ity dia manantena ny hanome anao kaonty Netflix maimaim-poana izahay. Raiso ny fialam-boly isan'andro amin'ny Netflix ary manomboka manomboka anio!
Betsaka ny fomba hijerena seho maimaimpoana. Netflix kosa dia manodidina ny $ 10 isam-bolana no vidinao. Mety ho sarotra ny mahazo kaonty maimaimpoana, saingy tsy azo atao izany.
Fomba ahazoana kaonty Netflix maimaim-poana:
Ny fomba voatanisa ao amin'ilay tranokala dia tena 100%, noho izany dia tsy mila miahiahy na inona na inona ianao. Ho simba ny fiainanao manokana, ary afaka miditra amin'ny kaonty Netflix sy tenimiafina maimaim-poana ianao hijerena sarimihetsika sy seho tianao indrindra.
1. Raiso ny fitsapana maimaim-poana ho an'i Netflix:
Fanavaozana - Tsy misy fitsapana intsonyAraka ny News & PR, Netflix dia tsy manome fanandramana maimaimpoana intsony any Etazonia. Ianao dia afakaaraho ireo fomba voalaza etsy ambanyhahazoana fidirana maimaim-poana.
Ity dia fomba iray miasa sy azo antoka 100% hampiasana Netflix maimaim-poana mandritra ny 30 andro eo nefa tsy mandany denaria iray akory. Ny tokony hataonao dia ny mankany amin'ny Netflix.com, ary misoratra anarana amin'ny famoronana kaonty vaovao. ankehitriny misafidy ny fitsarana maimaim-poana , ary hahazo maimaim-poana ny fidirana amin'ny atiny ianao.
Alefaso araka izay itiavanao azy koa amin'ny kalitao HD. Na izany aza, tsy maintsy manafoana ny fisoratana anarana ianao alohan'ny hifaranan'ny fotoam-pitsarana. Hamarino tsara fa hanafoana ny fisoratana anarana, ary tsy hahazo vola ianao. Raha mihoatra ny iray andro aorian'ny fitsapana ny fe-potoana, dia ho ampangaina amin'ny serivisy ianao.
Ity dia fomba fiasa iray izay misy risika. Ny fomba tsara indrindra dia ny fametrahana fampahatsiahivana ao amin'ny finday avo lenta momba ny fanafoanana ny famandrihana raha tsy te hahazo vola ianao.
2. Mampiasà Cards Virtual:
Ka efa nampiasa ny carte de crédit anao ianao mba hitsapana ny fitsarana maimaim-poana? Aza manahy; manana vahaolana amin'izany koa izahay. Afaka mamorona karatra virtoaly hiditra amin'ny kaonty Netflix ianao. Ny fizotrany dia hitovy amin'ny tsy maintsy safidinao ho fanandramana isam-bolana maimaim-poana.
Raha te hanana carte de crédit virtoaly dia mila carte de crédit manan-kery izay mandeha ianao. Aza mampiasa hafetsena sandoka satria mety hampiditra anao ao anaty olana izany, ary mety ho rava ny nofinofinao hijerena ireo sarimihetsika tianao indrindra.
3. Ampiasao ny Cookies Netflix
Ny fomba cookies ao amin'ny Netflix dia nanjary nalaza kokoa noho ny olona tia mampiasa azy ireo. Raha tsy tianao ny manahirana amin'ny fampiasana ny karatra, dia hanampy ny fametrahana ny extension amin'ny browser. Tsy mila apetrakao amin'ny antsipirihany ny banky rehefa mampiasa cookies, ka azo antoka ary mora ampiasaina ny fomba.
4. Mizarà ny kaontin'ny namanao
Ka ny namanao dia manana kaonty Netflix miasa? Maninona raha zarainao aminy ny kafe ho takalony. Ny drafitra sasany an'ny Netflix dia mamela ny mpampiasa hiditra ny atiny amin'ny efijery marobe. Samy afaka mankafy mijery fandaharana samihafa amin'ny fotoana iray ianareo roa, nefa tsy misy olana.
5. Famandrihana maimaim-poana miaraka amin'ny tambajotra finday:
Raha mikasa ny hanova ny tamba-jotra finday ianao dia izao no fotoana mety handehanana olona mandoa ny kaontinao Netflix. T-Mobile dia nanangana drafitra ahafahanao mampiasa ny serivisin'izy ireo rehefa mampiasa kaonty Netflix maimaim-poana na amin'ny sarany kely indrindra.
Ny fonosana natolotry ny T-Mobile dia fantatra amin'ny anarana hoe Netflix On Us. tsindrio Eto hijerena raha mahafeno fepetra amin'ny drafitra ianao na ahoana no fomba fisoratana anarana amin'ny serivisy T-Mobile.
Fomba hafa sasany raha toa ka tsy safidy ho anao ny fomba rehetra voalaza etsy ambony.
Ireo fomba voalaza etsy ambany dia mitaky fotoana hananganana karatra fanomezana sy tapakila ampy hahazoana Netflix maimaimpoana. Mila mampiasa fotoana ianao raha tsy te-handoa ny kaonty Netflix.
1. valisoa Google Opinion
Google dia iray amin'ireo marika an-tserasera malaza indrindra. Manana fanatrehana goavana amin'ny Internet izy ireo ary mifandray amin'ny mpanao dokam-barotra marobe. Manampy ny mpampiasa hahazo vola ny fampiharana ny valin-tenin'izy ireo. Valio ny fanontaniana vitsivitsy amin'ny famenoana ny fanadihadiana. Azonao atao ny mahazo ny valisoa rehefa mandray ny fanadihadiana farany ianao.
Ny mpampiasa iPhone dia mamindra ny valisoany amin'ny kaonty PayPal. Raha vantany vao tonga amin'ny fetra fandoavam-bola manokana ianao dia mandeha ho azy ny vola.
An-tapitrisany amin'ny Internet no tia ny serivisin'izy ireo ary mampiasa azy ireo isan'andro. Rehefa avy nandany ora vitsivitsy isan'andro amin'ny fampiharana ianao dia afaka manangona vola amin'ny famandrihana Netflix. Izy io dia fomba fiasa ara-dalàna sy 100% ho an'ny mpampiasa iOS. Ireo mpampiasa Android dia afaka mahazo ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny mari-pankasitrahana google play fotsiny. Ireo dia tsy mety amin'ny fividianana Netflix.
Misintona ho an'ny iOS
2. Hevitra Facebook
Facebook dia iray amin'ireo tranonkala media sosialy lehibe indrindra amin'ny Internet. Manolotra karama izy ireo hanatanterahana asa fanompoana amin'ny finday avo lenta. Afaka mandray anjara ianao amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanadihadiana, asa ary vokatra vaovao. Ireo dia havaozina matetika, ka manana safidy maro ianao.
Facebook dia mampiasa rafitra teboka hanome anao vola. Raha vantany vao manangona isa 1000 ianao, dia azonao atao ny mamoaka ny zava-misy amin'ny tena vola. Ny fampiharana dia manohana ny PayPal ary tafiditra tsara amin'ireo fomba fandoavam-bola hafa koa. Isa iray alina dia manome anao $ 5 amin'ny tontolo tena izy. Ny fanadihadiana voalohany indrindra momba ny fahasalamana amin'ny rindrambaiko dia mitaky vola ilainao amin'ny famandrihana tena ilaina.
Fenoy asa vitsivitsy mandritra ny iray volana hanangonana vola amin'ny fanavaozana an'i Netflix. Ity dia fomba tsara handoavana karama amin'ny Internet. Ny fampiharana dia misy ho an'ny mpampiasa Android sy iOS.
InboxDollars dia tranokala an-tserasera manome anao vola hampiasana ny serivisin'izy ireo. Afaka manao fanadihadiana tsy tapaka ianao ary mahazo vola tena izy. Ny sehatra dia fomba tsara ahazoana vola haingana. Ny hany ilainao dia ny fidirana amin'ny Internet. Ireo mpampiasa vaovao dia mahazo valisoa 5 $ sonia rehefa mamorona kaonty vaovao izy ireo. Ny bonus dia mitondra anao tsara handeha hahazo kaonty maimaim-poana.
Farano ny fanadihadiana vitsivitsy hampiakarana ny vola azonao. Io no tranonkala mora azo indrindra ho an'ireo olona te-hahazo vola. Hahazo vola ianao amin'ny fijerena fahitalavitra, famenoana fanadihadiana ary fividianana an-tserasera. Misy ny fifanakalozana vola ho anao hividianana amin'ny Internet.
Betsaka ny lalao azo zahana eto izay azonao andramana. Ireo koa dia mandoa be ary hanampy ny lanjan'ny valisoa omenao. Manome valisoa ho an'ireo mpampiasa ihany koa ny famakiana mailaka.
Swagbucks dia fomba iray hafa tsara ahazoan'ny mpampiasa vola amin'ny Internet. Ny tranonkala dia miasa amin'ny fitsipika mitovy amin'ny tranokala InboxDollars. Eto ianao dia afaka manangona isa na SBs hanampiana ny valisoa azonao. Vantany vao manafatra vola manokana ianao, dia azonao aloa ny vola aloa aloanao. Betsaka ny safidy amin'ny fandoavam-bola, ao anatin'izany ny Paypal sy ny karatra fanomezana. Ny Swagbucks dia manohana ny fivarotana amazon, fividianana tsara indrindra ary fivarotana maro hafa.
Tian'ny mpianatra erak'izao tontolo izao ilay tranonkala noho ny fahafahany mahazo vola. Ireo tranokalam-baovao malaza toa an'i Buzzfeed sy ny Huffington Post dia niantso azy io ho fomba tsara fitehirizana vola. Mahazo valisoa ireo mpampiasa amin'ny fampiasana serivisy tena ilaina ao amin'ny tranonkalany. Mandoa anao ny mijery Internet ary manao fikarohana. Misy ny fanadihadiana tsy tapaka, ary manampy ny andavanandro ny rindrin'ny tolotra. Azonao atao ny mahazo tsikelikely teboka ampy hividianana kaonty Netflix ho anao.
Generator kaonty Netflix:
Mety nahasarika ny sainao izany satria te hampiasa Netflix maimaim-poana ny ankamaroantsika nefa tsy misy ezaka. Fa ny fampiasana an'ireny mpamokatra herinaratra ireny no ho zavatra ratsy indrindra azonao atao. Ireo dia fitaovana sandoka izay manangona ny mombamomba anao ary mivarotra izany amin'ny tranonkala maizina.
Aza mampiasa mpamokatra herinaratra satria tsy hahazo maimaim-poana ny kaonty ianao ary atahorana ihany koa ny fiarovana anao. Tsy misy ny hacks na ny tweaks izay ahafahana manao izany. Mamporisika anao izahay hanalavitra ireo tranonkala toy izany ary hiaro tena. Ho hitanao fa feno fako manerana an'i Google izy ireo, saingy tranonkala mampidi-doza hampiasainao ireo.
Tombony azo amin'ny fanarahana ireo torohevitra voatanisa ato amin'ity lahatsoratra ity:
Misy tombontsoa marobe ho hitanao amin'ireo torohevitra ireo ankoatry ny fahazoana kaonty sy teny miafina maimaimpoana an'ny Netflix.
1. Fiarovana tsy misy tohiny
Ny fampiasana ireo torohevitra ireo dia manome toky ny fiarovana tsy misy tohiny, ary tsy mila miahiahy momba ny fandikan-dalàna ianao. Ny toro-hevitra rehetra voatanisa eto dia azo antoka ampiasaina.
2. Manangona vola
Afaka manangona vola be ianao amin'ny alàlan'ny fahazoana maimaimpoana ny kaonty Netflix. Tsy ilaina intsony ny mandany vola amin'ny fividianana ny kaonty.
3. Mora ampiasaina
Mora ampiasaina ireo fomba sy torohevitra voatanisa eto mba hahafahanao mahazo kaonty Netflix maimaimpoana.
Netflix dia sehatra tsara indrindra handefasana horonantsary an-tserasera. Io no toerana tsara indrindra amin'ny fialamboly an-tserasera amin'izao fotoana izao. Afaka miaina atiny misy kalitao ianao nefa tsy manahirana mihitsy. Manantena izahay fa ity torolàlana ity dia afaka nanome vaovao ampy momba ny fahazoana kaonty Netflix maimaim-poana. Andramo ireo dingana ary tadiavo raha mandaitra ny tenany!
Ahoana ny fomba fampidinana horonantsary Twitter & Gifs?
mandefasa sarimihetsika an-tserasera tsy misy fisoratana anarana
mijery sarimihetsika hd amin'ny Internet maimaim-poana
mandefasa sarimihetsika nefa tsy misoratra anarana
ny fomba fampiasana chromecast avy amin'ny pc
mijery fahitalavitra an-tserasera izao